किन लगाउँछन् महिलाहरु नाइटोमा गहना ? — News of The World
‘टाउकोको ओखती नाइटोमा’ यो बखान तपाइले सुन्नु मात्रै भएको छैन, बेला बेलामा प्रयोग समेत गर्नु भएको पनि होला । यहाँ भने हामी टाउको वा नाइटोको ओखतीका बारेमा कुरा गरिरहेका छैनौं । यहाँ उठाउन खोजिएको प्रसंग हो, नाइटोमा लगाउने गहनाको । नाइटोमा पनि गहना लगाउँछन् ? तपाइलाई अचम्म लाग्न सक्छ । अचम्म नमान्नुहोस्, अंग्रेजीमा ‘वेली पियरिङ’ भनिने नाइटोमा लगाउने गहना रौख र सुन्दरता दुवैका लागि लगाइन्छ ।
पूर्व युवराज्ञी हिमानी राज्यलक्ष्मी देखि चर्चित नायक नायिकाहरुले पछिल्लो समय नाइटोमा गहना लगाएको देखिन्छ । खासगरी नायिका र मोडेलहरुको नाइटोको गहनाको अहिले खुब चर्चा भइरहेको छ ।
खोज्दै जाँदा पियरिङ्गको इतिहास पुर्विय संसारमा पुगिन्छ । परापुर्वकालमै ऋषि र तपस्वी योगी बाबाहरुले ‘लिङ्ग’ (प्रजनन अंग) मा पीयरिङ्ग गरेको एन्टोन वीलीयमले बताएका छन् । नाक कान छेड्ने त हाम्रो पुरानै चलन हो । त्यसैको विकास क्रम नाइटो लगायतका संवेदनशील अंग सम्म विकास भएको विलीयमले आफ्ना लेखाईमा बर्णन गरेका छन् । विलियमका अनुसार ५ हजार वर्ष अगाडिबाट यस्तो पीयरिङ्ग सुरु भएको हो ।
सिनेक्षेत्रमा वेली पियरिङ
नाक कान छेडेर गहना लगाउने कार्यको थालनी पूर्वबाट भएको हो । यस्तै जेन्टल पीयरिङ यौनअङ्ग छेडेर गहना लगाउने काम पनि पुर्वबाटै सुरु भएको मानिन्छ । अहिले पनि सीवरात्रीको बेलामा जोगीबाबाहरुले लिङ्ग भेदन गरेर ठूला ठूला मुन्द्रा लगाएको पाइन्छ । तर, नाइटोमा छेडेर मुन्द्रा लगाउने वेली पियरिङ भने पश्चिमा चलन भएको बताइन्छ ।
हिप्पीकालमा बेली पियरिङ्गले संसारभर फैलिने मौका पायो । तर, सीनेमाका नायिकाहरुले बेली पियरिङ्ग गर्न थालेको भने ९० को दशकबाट मात्रै भएको पाइन्छ । सन् १९९३ मा हलिउड नायिका सील्भर स्टोनले पहिलोपटक नाइटो छेडेर गहना लगाएपछि यो चलन हलिउड, बलीउड हुँदै कलिउडसम्म पुगेको बताइन्छ ।
वेली पियरीङ्गमा नेपाली नायिका
पूर्व युवराज्ञी हिमानी रुप र सुन्दरतामा धेरै नायिका र मोडल भन्दा सुन्दर छन् । उनले साडी लगाएर ‘वेली पीयरिङ्ग’ गरेको नाइटो देखाउँदा नेपाली संचारमाध्यममा तरङ्गनै आएको थियो । यसैको सीको गरेर चर्चित नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी साहले पनि नाइटोमा गहना लगाएका आफ्ना तस्बीर बेला बेलामा राखेको पाइन्छ । साथै नायिका सीमा केसी, सुष्मा कार्कीका पनि विली पियरिङ्ग का ‘हट’ तस्बीरहरु सार्वजनिक भएका छन् । मोडल सुगन शाही पनि वेली पियरीङ्गको मामलामा उदार छिन । उनको नाइटोमा गहना लगाएको थुप्रै तस्बिर सार्वजािक भएका छन् ।
किन गरीन्छ पियरिङ्ग ?
पीयरिङ्गका बारेमा व्यापक खोज गरेका एन्टोन विलीयम ५ कारणले पीयरिङ्ग गर्ने गरेको बताउँछन् । उनले बताएको पहिलो कारण सौखसँग सम्बन्धीत छ । दोश्रो सौन्दर्यताका लागि पनि बढी पियरिङ्ग गरिन्छ । उनका अनुसार तेश्रो कारण संस्कृति र जीवन पद्धतिले पनि पीयरिङ्ग गर्न उत्साह सिर्जना गर्छ ।
चौथो कारणमा आनन्द खासगरी यौन आनन्द वा सेन्सेसनका लागि पनि पीयरिङ्ग गरिन्छ । र पाँचौ कारणमा विपरीत लीङ्गीलाई आफूप्रति आकर्षित गर्न पनि विभिन्न पीयरिङ्ग गरिन्छ ।
प्रताप दास र प्रविसाको ‘गाजल’ सार्वजनिक